Inyuvesi ithi ngeke bakhokhiswe imali yokubhalisa abaphuma emakhaya 'ampofu' | News24
Inyuvesi ithi ngeke bakhokhiswe imali yokubhalisa abaphuma emakhaya 'ampofu'
Johannesburg - IVaal University of Technology nomkhandlu omele abafundi (SRC) bavumelene ngokuthi abafundi abaphuma emakhaya engenelwa yimali engu-R350 000 nangaphansi kumele bangakhokhiswa imali yokubhalisa ekuqaleni nonyaka.
Abafundi abaphuma emakhaya angenelwa yimali engaphezu kuka-R350 000 kudingeka bona bakhokhe imali engu-R4 000 ukubhalisela ukufunda.
Lokhu kuze ngemuva kokudideka okwadalwa yisimemezelo sikaMengameli Jacob Zuma mayelana nokuthi luzosebenza kanjani uhlelo lwemfundo yamahhala.
OLUNYE UDABA: Ababili bazibulele ngemuva kokuthola imiphumela ka-matric
I-Economic Freedom Fighters Students' Command, ehola i-SRC eVaal university, ithe iphini likashansela livumile ukuthi bazobamukelwa abafundi abazofika bezofaka izicelo zokufunda, nokuthi ukubhalisa kanye nokuhlala kuzoba mahhala kulabo bafundi abaphuma emakhaya angenelwa yimali engu-R350 000 kuya phansi ngonyaka, nokuthi izikweletu ezindala zizokwesulwa.
Inyuvesi imemezele ukuthi abafundi abazobe bezokwenza unyaka wokuqala ngeke bakhokhe lutho uma bephuma emakhaya engenelwa yimali engu-R350 000 kuya phansi kodwa bazothola uxhaso lukahulumeni.
"Abathola imali yeNational Student Financial Aid Scheme (Nsfas) ngeke bakhokhiswe imali yokubhalisa ngo-2018,” kusho iphini likashansela uSolwazi Gordon Zide.